Dr Milkeessaa Miidhagaa barreeffamattiinkee kun xiqqoo nama naasifti. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDr Milkeessaa Miidhagaa barreeffamattiinkee kun xiqqoo nama naasifti.
Yaa Dr Milkeessaa Miidhagaa barreeffamattiinkee kun xiqqoo nama naasifti.
Jechuunis Hoolaan faasikaa kan Wayyaaneen qalamuuf qophaa’aa jiru kun Obbo Lammaa magarsaamoo? Dr. Abi Ahmed moo? Obbo Abbaa Duulaafaamoo? Aktiivistoota OPDO amma biyya keessaa ka’aa jiran kanamoo? eenyu namichi tokkichi qalmaaf qophaa’e kun nama jechisiisa. Enyumaanuu haata’uuti waraabessi dhiiga Oromoo dhugee bare kun akka isaan hinarganneef kadhannaakooti. Waaqayyo isaan haa’oolchu!
Ammammoo akka Beekan G Erena tti dhiiseen akka TAAJJABBIITTI waa jedhuu?
1. Barreeffamattiin kun mataanshee xawlwwaalummaa siyaasaa OPDO tti gurra gochuufi gati xiqqoo itti dabaluufiif borcamtee barreeffamakee kanaan as baate laataa?
2. OPDO fi Wayyaanee kana maaltu adda godhe? Utuu ta’eemmoo Wayyaanee gaggabdee dachee qorqite kana OPDO fi Aktiivistoota sidabalatee warreen alaa bookkisaa jirtu kanatu lubbuu itti deebise mitii?
3. OPDO’n amma isin duratti akka hanqaqaaquu buruquuf jettuutti eegamaa jirtu kun geggeessitootaafi gootota keenyaa warra mana hidhaa jiran akka Baqqalaa Garbaa, Dr. Mararaa Guddinaafi kkf caalumoo? Isaniif hagas faarsitaniittuu? Kan isa bosona jiruu silaayyuu ‘diina’ jettanii isinillee farrajjaniittuuti.
4. OPDO‘ duraa sana as deebisuuf jetteetta. Animmoo ishee ammaa kanatu irra gamnummaa guddatan jedha. Jechi hundi jecha bilisummaati’ gooftaa biraas hinqabani. Garuu mee har’uma kana Oromiyaa keessaa agaziin akkamiin akka oolteefi meeqa akka reebaa oolte quba hinqabdani? Har’as maaltu ta’e? Inni ta’aa ture hundi walumaagaltee Wayyaaneetiin akka ta’e ifaam. Mallattoo baayyeetu as ba’eera. Egaa jabaadhaamee…
5. Amma akka adeemamaa jiru kanattimee, OPDO’nis ofirratti fincaa’aa; warreen akka keessaniis isaaniif watwwaataa hamma yoomiitti jiraatamaa? Falli jiraam! ….Kamiifuu, shirri wayyaanee xaxaan kan isin keessaa ba’uu hindandeenye dhufaa jiraatii itti qophaa’aa… mee barruu kanaa gadiis qalbeeffadhaa…Tigiroonni walaghiirra turteetti….
Odeessi walgahii fi marii Addi bilisummaa Ummata Tigray irra ture fi jiru ilaallatu kun nama iccitii jaraa argachuu danda’urraa as ergame. Qalbiin dubbisaa!
“Walgahii fi mariin TPLF Maqaleetti taa’ama jiru ammayyuu itti fufee geggeeffamaa jira. Tarsiimoo fi qaphxiiwwan gurguddoo jarri irratti mari’atanii walii galan iraatti hojii lakkaawamee hojjechuuf jiran kan armaan gadiiti.
1ffaa. Yoo danda’ame fi ol’aantummaa jaraa hin tuqu yoo ta’e wal dandeessisuun akkuma kanaan dura turetti itti fufuu kan jedhu yaada jalqabaati. Kun garuu carraan isaa baayyee xiqqaa akka ta’e walii galteerra gahaniiru.
2ffaa: Ol’aantummaa jara dhabsiisuuf kan yaalaa jiran caasaa mootummaa Amaaraafi Oromiyaa ti. Caasaalee lamaan kana ummata irraa adda kutuun tarsiimoo lammataati. Kana keessatti caasaas ta’e naannoon isaan baayyee cimaadha jechuun keewwatan kan naannnoo Amaaraati. Kan naannoo Oromiyaa namoota murtaawe kanneen amma Oromiyaa bulchaa jiran gatii yoo dhabsiisan caasaan cimaan isaaniin ofirraa dhorku Oromiyaa keessa akka hin jirre dhaadatan. Abbaa Duulaa immoo bakki inni amma itti galfame osoo hin hafiin xiyyeeffannoo basaasaa keessa akka galfatan dubbatan. Abbaa Duulaa rukutuuf karoora qabu.
3ffaa: Amma maree Eertiraa waliin godhaniin milkaawu ifoomsan. Biyya keessaa immoo naannoolee kanneen akka Beenishaangul, Somaale, Gambeellaa fi Affaar waliin ta’uun humna Oromiyaa fi Amaaraa dadhabsiisuuf akka hojjetan irratti walii galan. Humnoota naannolee harmaan olitti caqafamanii fayyadamuun “federeshinii tokko” uumuuf mareen kan xumurame yoo ta’elle Afar garuu ammalle akka isaaniin barbaadametti walii akka hin galle dubbatan.
4ffaa: Yoo tarsiimoon harmaan olitti tarreeffaman hundi milkaa’uu didan “Ripaabiliika Tigray” hundeeffachuun dirqama akka ta’ee fi qophii barbaachisaan akka godhamu walii galaniiru.
HUB 1: Kan baayyee na ajaa’ibe garuu “Ripabiliika Tigray” ijaaruuf akkaa haal dureetti kan keewwatan sun hamaadha. Innis mootummoota cimoon kan akka mootummaa Amaaraa fi Oromiyaa nu cinaa osoo jiranii “ripabiliikni Tigray” milkaawuu waan hin dandeenyeef mootummoota kana humna waraanaa qabaniin barbadeessuu fi naannolee ollaa waliin rakkoo isaan akka salphaatti keessaa bahuu hin dandeenye keessa galchuun barbaachisaa akka ta’e walii galteerra gahaniiru.
HUB 2: Tarsiimoolee harmaan oliitti tarreeffaman hunda lammiin isaanii “liistroo” irraa eegalee hanga “diiplomaatiitti” jiran hubachiifamaaniiru.
AMMA yaaddoonko Oromiyaan sadarkaa jarri qophoofteen humnaa fi qophii qabaachuu ishee yaaddoon guddaan qaba. Waan mootummaan Oromiyaa amma jiru qabatee jiru uummatuma keessa dhaabbannee waliin gara fedhe deebina kan jedhu akka ta’e nan beeka. Garuu amma yoomiitti uummata waliin dhumnaa? Qophiin humnaas jiraachuun barbaachisaa ta’uu isaa akeekuufani. Jarri immoo saalfii hin beekan waan ta’eef tarkanfii humnaa fudhachuu ni malu. Manni maree nageenyaa yeroo darbe ijaarames lola kanan booda jiruuf of qopheessuuf akka labsatan yaadako ibseen ture. Ammas humnoonni federaalaa sababa mana maree nageenyaan naannoo keessa raabsamee jiru bakka humni poolisii, akka walii galaatti humni nageenya naannoolee jiru adda baafatanii akka xummurantu dubbatama. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi ummanni keenya qophii guddaa fi ofeeggannoo cimaa gochuu qabu jedheen dhaammadha.”
1. Wayyaaneen Qawween aangoo qabatte; qawweedhaanis gadi lakkisti. Kanaaf waraana labsaa. Akkamitti?
2. OBN miidiyaa hawaasaa jettan miti? edaa eengadda ergamaa Tigireetu irra taa’ee xiinxalaa ture malee….kk… Egaa miidiayafi uummata Miliyoona 50 waan qabdaniif Miliyoona 5 f akkas hin rom’iina. Gaafa sana diyaasfooraan hunduu qawwee bituun sinfaana dhaabata. Kana falli tokkoffaafi kan dhumaa!!
አንዳንድ የተጋሩ አክቲቪስቶች (የFB ጋዶቼ) የዶ/ር አቢይ የኤገሌ ክሮንክለር (chronicler) ነህ አሉኝ፡፡ Well, እኔ ግን እነኝህ ጋዶቼ የነእገሌ ክሮንክለር ናቸው አልልም፡፡ በመርህ ደረጃ የግል ሃሳባቸውን ነው የንፀባረቁት፡፡ ግን ለምን ተናደዱ? አሃ እውነት ሰገለጥ እኮ ያናድዳል፡፡
Via: Milkeessaa Miidhagaa